Archives famaizana - Fanisana ho an'ny fanjakana
Tag Archives: famaizana
Luz de Maria - Fahitana sy fisaintsainana
Ry zanak'olombelona, ​​aza maditra!
Ireo Mpaminany Marina
Iza ireo tena mpaminany sandoka amin'izao androntsika izao?
Alicja Lenczewska - Fandrasana ny fetin'ny Fanjakana
Hamirapiratra ny voninahitry ny fandreseko izao tontolo izao.
Gisella Cardia - Jereo ny fomba itondrany ahy
Hatramin'ny fararano miakatra dia hiseho ny virus hafa.
Gisella Cardia - Fa maika ankehitriny
Tsy azonareo ve fa tonga tato aoriana izao?
Luz de Maria - Tsy hitato ny fitsarana
Mijanona ho mahatoky mihoatra ny zavatra rehetra.
Edson Glauber - Natsangana ny sabatra mirehitra
Nahatratra ny sisin'ny lavaka mangitsokitsoka ny olombelona.